Filtrer les éléments par date : samedi, 13 avril 2019
samedi, 13 avril 2019 20:07
Ambohijafy Toamasina I: Nitsidika sy nifanakalo hevitra tamin'ny mponina i Irmah Naharimamy
Nitsidika ireo mponina tao amin'ny cité indigent parcelle 14/31 Ambohijafy ny kandida Irmah Naharimamy sy ireo mpiara-miasa aminy. Niangavian'ny mponina azy tamin'izany ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa eo an-toerana, satria rehefa avy ny orana dia dobon-drano ny faritra, tsy ampy ireo toerana hanariana fako, tsentsina ireo tatatra, ka miakatra ny loto sy ny fofona rehefa mafana ny andro.
Nisy ihany koa ireo mponina tena sahirana teo an-toerana ka nitondra izay voatsirambin'ny tanana ny Kandida ho solombavambahoana Irmah Naharimamy, anampiana ireo sahirana, toy ny vary, sy savony...
Nanentana ireo mponina kosa izy ny hitandroana ny fahadiovana, ary andraisan'ny tsirairay andraikitra ny amin'izany.
samedi, 13 avril 2019 19:43
Boriboritany faharoa: Dinidiniky ny mpianakavy niaraka tamin'i Rastany
Tonga niaraka nifanakalo hevitra tamin'ireo solotenan'ny mponina teny Ambohipo, Ambolokandrina, ary Andohanimandroseza ny kandida sy ireo iray lisitra aminy, avy amin'ny Tiako i Madagasikara, Randrianarisoa Stanislas na Rastany, depiote teo aloha voafidy tao Antananarivo faha-2.
Anisan'ny nivoatra tamin'ny lahadinika ny fandaminana ny tanàna, ny tsena, ny fandriam-pahalemana, ary ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa toy ny sekoly sy ny dispensera.
Tao ihany koa no nangataka ny hisian'ny Lycée ety amin'ny boriboritany faha 2, satria tokoa, efa misy ny EPP, ny CEG, ny Oniversité ety, fa ny Lycée no voadingana.
samedi, 13 avril 2019 19:40
Amoron'Ankona - Ambohimangakely: Jiolahy nanafika fiara mpitondra vola, maty voatifitra
Nanao taingin-droa tamin'ny moto scooter (BWS) ireo jiolahy, nanafika andro atoandrobe nanahary, fiara mifono vy iray mpitondra vola an'ny orinasa Brink's.
Maty voatifitra ary nitsirara teo afovoan'arabe ny iray, mbola ifanenjehan'ny Zandary ny faharoa.
samedi, 13 avril 2019 19:38
Tanambao Manampotsy: Voasambotry ny Polisy ilay tovolahy namono ny vady aman-janaky ny mpampiasa azy
Polisin'i Vatomandr­y no nisambotra an'ity tovolahy, vao 20 taona ity ny alahady 07 aprily 2019 tany Ambohimiarina, Kaominina Manakana, Disitrikan’i Tanambao Manampotsy.
Nahavita namono nahafaty ny vady aman-janaky ny mpampiasa azy : vehivavy bevohoka sy zaza 04 taona tany Toamasina ny 19 martsa 2019 lasa teo izy, dia lasa nitsoaka.
Nisokatra ny fanadihadiana niainga avy amin’ny baikon’ny Fampanoavana ka fantatra fa lasa nitsoaka tany Vatomandry ity nahavanon-doza ity niaraka tamin’ny finday an-dratompokovavy.
samedi, 13 avril 2019 13:09
Faritra Boeny: Trano fianarana miisa 16 no voatsangana tamin’ny tahirim-bola FDL
Trano fianarana ho an’ny CEG miisa 14, lycée iray miaraka amin’ny tranon’ny kilasy mandry zazavavy mahazaka mpianatra 4, samy miampy fampitaovana, trano fivoahana sy vovon-drano ary zaridaina fambolena anana, ary làlan-tany mirefy 45km. Ireo no vokatry ny fampiasana ny Tahirim-bola ho an’ny fampandrosoana ifotony andiany voalohany na FDL (Fonds de Développement Local) teto amin’ny faritra Boeny.
Tatitra nataon’ny Tale Jeneralin’ny FDL, Raharinjatovo Hanitra io raha nitsidika ara-pomba fanajana ny Lehiben’ny faritra Boeny mpisolotoerana, Bazezy V. Clavelah izy ny alakamisy 11 aprily 2019 tao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina Mahajanga.
Mitentina 11 tapitrisa Euros no nanaovana ireo foto-drafitr’asa ireo. Kaomina miisa 14 sy ireo Fivondronamben’ny Kaomina ao amin’ny OPCI (Organisme Public de Coopération Intercommunale) eto Boeny no nampiasana io FDL andiany voalohany io.
samedi, 13 avril 2019 11:53
RN5A Ambilobe-Vohémar: Nomarihana androany ny fanombohan’ny asa fanamboarana
Tonga teto Ambilobe nitarika ny lanonana manamarika ny fanombohan’ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faha-5A, mampitohy an’Ambilobe amin’i Vohémar, androany, i Andry Rajoelina.
samedi, 13 avril 2019 11:23
CAN 2019: Vondrona B i Madagasikara
Miray vondrona B i Nigéria, Guinée, Madagasikara ary Burundi.
Fandaharan-dalao Vondrona B :
- Lalao 1 - Sabotsy 22 jona (11ora alina) :
Guinée vs Madagasikara
- Lalao 2 - Alakamisy 27 jona (5ora30) :
Madagasikara vs Burundi
- Lalao 3 - Alahady 30 jona (7ora) :
Madagasikara vs Nigeria
samedi, 13 avril 2019 10:30
Manapatanana Mahajanga: Nandresy teo anivon'ny fitsarana ny Kaominina ary niroso tamin'ny fandravana
Vao maraina ny sabotsy 13 aprily, dia tonga tety Manapatanana Amborovy, lalana mihazo ny seranam-piaramanidina ny Ben'ny Tanànan'i Mahajanga, Andriantomanga Mokhtar Salim, niaraka tamin'ny vadintany sy ny mpitandro ny filaminana, niroso tamin'ny fandravana ilay tamboho avo be, nataona karana iray izay milaza fa nividy ny tany.